Xirmooyinka Buraashka Bilaashka ah ee Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sidaad ogtahay, burushku waa aalad aasaasi u ah la shaqeynta Adobe Photoshop waxayna noo oggolaaneysaa inaan abuurno dhammaan noocyada qaabab kala duwan. Kuwa la yimaada arjiga caadiga ah waa kuwo aad u yar oo iyaga la ah ma awoodi doonno inaan ku shaqeyno saxsanaanta aan u baahanahay. Si tan loo xaliyo waxaan u baahan doonaa inaan helno a qalab ballaaran oo ku filan. Waxaan cusbooneysiin karnaa qalabkeena markasta oo aan rabno iyada oo loo marayo xirmooyin aan soo dejisan karno oo aan si fudud ugu rakibi karno.
Maanta waxaan idinla wadaageynaa laba xirmo oo ay ku jiraan in ka badan 50 nooc, mid ka mid ah ayaa loogu talagalay inuu la shaqeeyo qaabab biyo biyo mid kalena inuu shaqeeyo qiiqa iyo ceeryaanta. (Sidoo kale waad heli kartaa boostadayada Xirmo burush 152 ah oo loogu talagalay Photoshop meesha aad ka heli karto burushyada nooca guridda).
Ma garanaysid sida loo rakibo xirmooyinka? Waa wax aad u fudud! Si loo rakibo waa inaad raacdaa talaabooyinkan fudud:
Markaad faylka ka soo dejiso Google Drive, waa inaad ka soo saar waxyaabaha taasi waa gudaha faylka qaab .rar ah.
Burcad arjigaaga Photoshop oo xulo burush.
Fur Xulashada buraashka hore.
Riix badhanka xulashooyinka (aaladda marshada) ka dibna riix xulashada Burush culeys.
Raadi xirmooyinka meesha aad ka soo saartay oo aad ku xulato.
Ku laabo Picker-ka Preset-ga oo hubi in la heli karo.
Waxaan horey u haysanay buraashkeena!
Waxaad ka soo dejisan kartaa cinwaanka soo socda ee Google Drive: Burush biyo-biyood y Burushyada qiiqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Burushka Adobe Photoshop: 2 Xirmo Bilaash ah